स्विचबोटले २ नयाँ उत्पाद सुरू गर्‍यो: मोशन सेन्सर र सम्पर्क सेन्सर | Androidsis
दानीप्ले | 22/06/2021 22:04 | अद्यावधिक गरियो 23/06/2021 08:22 | हाम्रो बारेमा, अन्य उपकरणहरू
प्राविधिक प्रगतिहरूले हाम्रो दैनिक जीवनमा ठूलो प्रगति गरेका छन्, कम्तिमा हामी पहिले यो थाँहा थियौं। गृह स्वचालन धेरै घरहरूमा अवस्थित छ, आधारभूत भूमिका खेल्दै जब यो जडानको लागि आउँदछ, कि पत्ता लगाएर प्रकाश खोल्ने या फोनबाट एक उपकरण पहुँच गर्न।
स्विचबोट, प्रसिद्ध स्मार्ट उपकरण कम्पनी, घोषणा गरेको छ स्विचबट मोशन सेन्सर र स्विचबोट सम्पर्क सेन्सर। तिनीहरू दुई नयाँ उत्पादनहरू हुन् जुन घर अटोमेसन सेटको साथ एकीकृत छन्, मोशन सेन्सरहरू हाम्रो दिन दिनको लागि उपयोगी छन् र सही छन् यदि तपाईं घरमा उपलब्ध ती उपकरणहरूलाई जीवन दिन चाहनुहुन्छ भने।
1 स्विचबट मोशन सेन्सर
2 स्विचबोट सम्पर्क सेन्सर
3 सबैका लागि उपयुक्त
स्विचबट मोशन सेन्सर
पहिलो स्विचबट मोशन सेन्सर हो, केवल २.१ x २.१ x १.२ इन्च मापनको सानो डुअल मोशन सेन्सर। पीआईआर (निष्क्रिय इन्फ्रारेड) मोशन सेन्सरलाई धन्यवाद यसले कुनै पनि मानवको उपस्थिति पत्ता लगाउन सक्छ, यसले प्रकाश सेन्सर समावेश गर्दछ जुन दिन वा रात हो कि भनेर मापन गर्न।
यो सेन्सर एक सम्बन्धित स्मार्टफोनमा सूचना पठाउन सक्षम हुनेछ, जब यो एक आन्दोलन पत्ता लगायो, जो यस्तो परिस्थितिहरूको लागि यो एक उत्तम ग्याजेट बनाउँछ। यो घर, कार्यालय र साइटहरूको लागि आदर्श हुनेछ जसमा मानिसहरू दिनभरि बित्दछन्।
स्विचबट मोशन सेन्सर, अन्य स्विचबट उत्पादनहरूसँग मिसिएको, यसको कार्यहरू विस्तार गर्दछ, घरमा घरमा प्रकाश खोल्न सक्षम हुनु सहित तपाईलाई अँध्यारोमा गाह्रो पत्ता लगाउन। मोशन सेन्सर र अन्य उपकरणहरूको साथ बत्तीहरू खोल्नुको अलावा ब्रान्डको, तपाईं सम्भावित घुसपैठाहरूको भिडियो रेकर्ड सुरू गर्न सक्नुहुनेछ वा मोशन सेन्सरको माध्यमबाट पार गर्दै कुनै पनि उपकरणहरू सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ।
स्विचबटको मोशन सेन्सर पत्ता लगाउने काम लगभग meters मिटर हो ººº ठाडो रूपमा ११º। तेर्सो कोणको साथ। यस उपकरणसँग अमेजन अलेजा र गुगल सहायकसँग अनुकूलता छ, केवल दुई AAA ब्याट्रीसँग पछिल्लो years बर्षसम्म काम गर्नका साथै अधिक स्वायत्तताका लागि क्षारीय ब्याट्री प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ।
स्विचबट मोशन सेन्सरको मूल्य २०..20,91१ युरो हो र यो उपलब्ध छ यो लिङ्क.
स्विचबोट सम्पर्क सेन्सर
स्विचबट मोशन सेन्सर स्विचबोट सम्पर्क सेन्सरको साथ हो, एक आदर्श सेन्सर दुबै ढोका र विन्डोजमा स्थापना गर्न। यदि कुनै ढोका वा विन्डो कुनै पनि समयमा खोलिएको छ भनेर जान्नको लागि आदर्श हो, स्विचबट ब्रान्डका अन्य सेन्सरहरूसँग आफै पूरक हुन्छ।
स्विचबोट सम्पर्क सेन्सर ग्याजेटलाई धन्यबाद तपाई एक पटक घर छाडेर बत्तीहरू बन्द गर्न सक्नुहुनेछ, तर तपाईले प्रवेश गरे पछि त्यसलाई स्वचालित रूपमा पनि खोल्छ। आदर्श यदि तपाईं बाहिर जान चाहनुहुन्छ वा बन्द गर्नुहोस् चाहे तपाईं बाहिर जानुहुन्छ वा तपाईं प्रविष्ट गर्नुहुन्छ भने सुरु देखि यो पहिले कन्फिगर गरेर।
सेन्सरले दुई भागहरू समावेश गर्दछ, सम्पर्क सेन्सर २.2,8 x १ x ०.1 इन्च मापन गर्छ, जबकि ढोका / विन्डोमा जाने चुम्बक १.0,9 x ०.० x ०. 1,4 इन्चमा तल जान्छ। अरु के छ त, सम्पर्क सेन्सरले तपाईंलाई सन्देशको साथ सचेत गराउन सक्छ यदि कसैले ढोका, विन्डो, ड्रयर वा जहाँसुकै यो स्थापना गरिएको छ, खोल्छ, तर हब मिनी आवश्यक छ।
पत्ता लगाउने बारे meters मिटर छ, ont ०ally तेर्सो र º०º ठाडो रूपमा, जबकि डिटेक्टर र चुम्बकको दूरी सही अपरेशनको लागि mm०mm भन्दा बढी हुन सक्दैन। स्विचबोट सम्पर्क सेन्सरले दुई AAA ब्याट्रीहरूको साथ years बर्षको अनुमानित अवधिमा काम गर्दछ, गुगल सहायक र अमेजन अलेक्सासँग उपयुक्त।
उपकरण उपलब्ध छ यो लिङ्क २.२। युरोका लागि।
सबैका लागि उपयुक्त
एक छुट्याउन सकिने चुम्बकीय आधारको साथ, स्विचबोट गति सेन्सर यो घर मा जहाँसुकै स्थापना गर्न सकिन्छ, जस्तै हलवे, छत, भित्ता, शेल्फ, ढोकामा, फ्रिजमा, वा ओछ्यानमुनि। फाइदाहरू धेरै हुन सक्छन्, विशेष गरी यदि तपाईं बिभिन्न बिन्दुहरू नियन्त्रण गर्न चाहनुहुन्छ भने।
स्विचबट मोशन सेन्सर र स्विचबोट सम्पर्क सेन्सर घर र कामका दुबै प्रयोगको लागि एकदम सही ग्याजेटहरू हुन्, किनकि उनीहरूलाई जटिल स्थापनाको आवश्यकता पर्दैन। दुबै मिलेर काम गर्न सक्छन्, एक पहिचान को लागी कुनै पनि मानव आन्दोलनको, जबकि सम्पर्क सेन्सर ढोका, विन्डोज, दराज र अन्य रणनीतिक स्थानहरूको लागि उपयुक्त छ।
तिनीहरूको आयामहरू र कम वजनको लागि धन्यवाद, मोशन सेन्सर र सम्पर्क सेन्सर स्थापना योग्य छन् घरमा र कम्पनीमा जता पनि। तिनीहरू अमेजन अलेक्सा र गुगल सहायक संग जोड्न सकिन्छ, यसका लागि दुबै ग्याजेटहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुन केहि चरणहरू अनुसरण गर्न आवश्यक छ। मोशन सेन्सर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ किन्नुहोस् र सम्पर्क सेन्सर भित्र यो लिङ्क.
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » हाम्रो बारेमा » स्विचबोटले २ नयाँ उत्पादनहरू सुरू गर्दछ: मोशन सेन्सर र सम्पर्क सेन्सर
शीर्ष १० एनिम वालपेपर अनुप्रयोगहरू